Kuisa TLP pane Arch Linux | Kubva kuLinux
TLP chishandiso chemberi icho chinogadziriswa chete neiyo terminal uye inovavarira kubata simba reLaptops edu, ichishandisa zvirinani bhatiri ravo.
Handizive kana ini ndatova nechishandiso chekushandisa simba mukati KDE, GNOME o Xfce Izvo zvinodikanwa kuisa ichi chishandiso, zvisinei, kana iwe uchida kuyedza ndinokuudza iwe kuti sei, zvingave zvakare zvinobatsira kune vashandisi vanongoshandisa Window Mamaneja.
Kuisa pane kugovera kunze kweArch Linux, unogona kuenda ku Iyi link
Vashandisi vane Yaourt yakaiswa inofanirwa kumhanya:
Asi ini handishandisi izvo, ndinoita zvinhu nazvo makepkg. Dambudziko nderekuti pandakaedza kugadzira iyo package kuti ndiiise, ndakawana kukanganisa nekuti script PKGBUILD Ini ndanga ndichiedza kuwana danda raisavapo.
Matanho ekuisa TLP
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuisa kutsamira kwaunoda BPD:
Iye zvino tinofanirwa kuenzanisa chirongwa ichi kubva GitHUB:
Takabva pa tarball neMagwaro anodiwa kuitira kuti makepkg basa:
Tinoisunungura uye inomhanya makepkg:
Kana pasuru tlp-0.3.9-9-any.pkg.tar.xz yagadzirwa tinoriisa ne:
Uye ndizvozvo. Sezvandakaverenga, hazvidi kuti uite chero chimwe chinhu, ingo gonesa sevhisi uye umhanye:
$ systemctl inogonesa tlp.service $ systemctl kutanga tlp.service
Wobva waona mamwe manhamba kana zvishandiso zvemakomputa edu isu tinoita chero yeiyi mirairo mitatu (zvakasiyana):
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Kuisa TLP paArch Linux
Zvakanaka. Nekudaro, muDebian mune iyo console application inonzi TOP iyo inoshanda chaizvo uye inokuratidza maitirwo munguva chaiyo uye inokurumidza zvakanyanya kupfuura mamaneja emabasa andaona kusvika zvino.
TOP chikamu cheGNU. Chaizvoizvo ese GNU / Linux masisitimu ane TOP (izvo zvandisingade, nenzira… ndinosarudza HTOP). Uye ini handinzwisise zvine chekuita neTOP neTLP ...
Ndinobvumirana newe. Uyezve, TOP inoratidza huwandu hwerusununguko ndangariro zvisirizvo: inozviratidza kumashure. Enzanisa zvaunowana uchishandisa TOP nezvaunowana uchishandisa HTOP uye iwe uchaona zvandiri kureva.
Carlos Saldaña akadaro
Mhoroi ndanga ndichifunga kuti chinyorwa chakakura asi ndoda kuziva kana iyo imwechete package inoshandira debian uye kana yakaiswa nenzira imwechete, sezvo ndine xps 15 iyo iri mu ... inotora angangoita maawa mashanu asi mune dhiri 5 7bits zvinotora 64:2 kusvika…
Pindura kuna carlos saldaña
Ndine urombo. Ini ndakakanganwa kubatanidza kune iro peji rerojekiti uko kwavanotsanangura maitiro ekuisa mune yega Distro. Ini ndinogadziridza iyo posvo munguva pfupi.
Elav zvakanaka kujekesa kuti vashandisi vanoshandisa yaourt havadi git kana kunzwisisa nezve tarballs, zvakaringana ne:
$ Yourt -S tlp
Ehe, ndiyo yekutanga nzira yandinoratidza muchinyorwa.
Kana ini ndainzwisisa nenzira kwayo, ichi chingori chirevo chekutarisa chemaitiro, masevhisi nemidziyo yatakamisa kana kushandisa panguva ino, kana ndiri kukanganisa?
Alexander Nova akadaro
Zvakakwana zvachose. TLP ibasa rekuchengetedza simba, haina chekuita neyekuongorora maitiro, masevhisi nemidziyo. Isa iyo uye uone kuti bhatiri rako rinofamba sei; inofanira kushanda zvirinani (kunyangwe kutaura chokwadi ini handiiona iri yekutsiva yeJupiter)
Pindura kuna Alejandro Nova
ok ndatenda nezano. kuyedza izvozvi
Imwe tsananguro, hapana chikonzero chekuwedzera Sudo kune yaourt: v
Kwete chete kuti hazvina basa asi zvakare hazvikurudzirwi, uye Yaourt pachake anomunyevera paanenge achida kuishandisa nesudo.
Mubvunzo wangu ndewekuti chii chiri nani tlp kana malaptop-zvishandiso, yangu laptop panguva ino ine malaptop-maturusi akaiswa
Sekubvunza kwaIrvandoval, mumwe munhu kubva pane ruzivo, vakaona kuita kuri nani? Izvo zvakakodzera kuisa?
tlp yave kuwanikwa kubva kune yepamutemo archlinux repos
Nezve iyo yekupedzisira yakaburitswa chinyorwa